Chii chinonzi Knowledge Management? • Zivo SUCCESS
Nekuchimbidza? Skip to the kukurumidza pfupiso.
Basa repasi rose rehutano nebudiriro rinosanganisira nharaunda dzakasiyana dzevanhu nemasangano anoshanda akanangana nezvinangwa zvakafanana. Mapoka anoshanda zvakanyanya mukuzadzisa zvinangwa izvi ane masisitimu aripo ekugara achigovana ruzivo rwakakosha, kuwana mukana nekukasira kutsvagiridzo yazvino, uye shandura zvidzidzo zvakadzidzwa kuita zvirongwa zviri nani. Kutarisira ruzivo-Nzira yekuunganidza nekugadzirisa ruzivo nekubatanidza vanhu kwairi kuti vagone kuita nemazvoiri pamwoyo wezvirongwa izvi. Kutarisira ruzivo kunogona kuvandudza kurongeka uye kuwedzera kudzidza kune musoro, kubatana, uye kushandisa.
WATCH: Hwirudzuro yeKutonga Kweruzivo uye Zvikamu Zvayo Zvinokosha
Ruzivo rwakawanda runogadzirwa, kubatwa, uye yakagovaniswa kuburikidza nekudyidzana kwevanhu-kuchiita kuti ive chiitiko chekushamwaridzana.
Vanhu anofanira, naizvozvo, kuve musimboti wechero nzira yekutarisira ruzivo, kunyanya sezvo ruzivo rwakawanda rwuri mumisoro yevanhu uye rwakaoma kuendesa kune vamwe. Vanhu vanogona kubatsira kurima nharaunda inokurudzira kuchinjana kwezivo uye kushandiswa kwemaitiro ekutonga ruzivo.
Maitiro, zvose zviri pamutemo nezvisina kurongwa, tibatsirei kubata, uye kupanana ruzivo, nepo tekinoroji platforms inogona kukurumidzisa kuchengetedza ruzivo, kudzorera, uye kuchinjana—chero bedzi zvichishandiswa muchirevo chechinyorwa.
Iyo Ruzivo Kutungamira Mugwagwa Mepu
Iyo Knowledge Management Road Mepu inhanho-nhanho shanu yakarongeka maitiro ekugadzira, kuunganidza, analyzing, synthesizing, uye kugovana ruzivo muzvirongwa zvehutano zvepasi rose. Matanho acho anosanganisira:
Ongorora zvinodiwa: Nzwisisa mamiriro edambudziko rehurongwa hwehutano hwepasi rose uye ona kuti manejimendi eruzivo angabatsire sei kurigadzirisa.
Dhizaini zano: Ronga maitiro ekuvandudza chirongwa chako chehutano pasi rose uchishandisa ruzivo rwekupindira kwekutonga.
Gadzira uye dzokorora: Shandisa maturusi matsva ekugadzirisa ruzivo uye matekiniki kana chinja aripo kuti asangane nezvinodiwa nehurongwa hwehutano hwepasirese.
Unganidza uye tarisa: Shandisa maturusi ekugadzirisa ruzivo uye matekiniki, tarisa maitiro avo, uye gadzirisa maitiro ako uye zviitwa kuti zvienderane nekuchinja kwezvinodiwa uye chokwadi.
Ongorora uye shanduka: Tsanangura kuti wakaita sei zvinangwa zvako zvekutonga ruzivo, tsvaga zvinhu zvakakonzera kana kukanganisa kubudirira kwako, uye shandisa zviwanikwa izvi kupesvedzera zvirongwa zvenguva yemberi.
ONGORORA: Iyo Interactive KM Mugwagwa Mepu
Vazhinji vedu tinodzidzira ruzivo rwekutonga zuva rega rega tisingazvizive. Kana vatapi vehutano vachinongedzera kune yazvino nhungamiro yemabatiro echirwere, vari kushandisa hutungamiri hweruzivo. Kana maneja wechirongwa achiburitsa nharembozha nyowani kuti ifambise kutaurirana pakati pevashandi vehutano munharaunda nevatariri vavo, vese vari kushandisa manejimendi eruzivo.
Ndeipi nzira idzi uye zviitiko zvakafanana? Vanobatsira varapi vehutano pasi rose kugovana uye kushandisa ruzivo rwakakosha mubasa ravo. Migumisiro? Vashandi vehutano vakasimba, mabasa ehutano ari nani, uye kureba, hupenyu hune hutano.
Zivo ndechimwe chezvinhu zvedu zvakakosha kugadzirisa matambudziko ehutano pasi rose. Zvatinoziva zvinokanganisa zvatinoita-uye saka mabatiro atinoita ruzivo anogona kukanganisa vanhu, nharaunda, uye, pakupedzisira, utano, social, uye mamiriro ehupfumi hwenyika.
Masangano ehutano pasi rose anotora mazano ekugadzirisa ruzivo uye maitiro anogona kusimbisa kushanda kwevashandi vehutano uye zvirongwa. Nokuita kudaro, vanogona kuvandudza hutano hwehutano uye kunyange kuponesa hupenyu.
Data: zvivakwa zvekuvaka zveruzivo (nhamba, statistics, chokwadi chega chega)
Information: data inowanikwa mune inobatsira, structured, uye nenzira ine musoro
Zivo: kukwanisa kuita zvinobudirira
Kutarisira ruzivo: hurongwa hwakarongeka hwekuunganidza nekugadzirisa ruzivo nekubatanidza vanhu kwairi kuti vagone kuita nemazvo
Zvidzidzo zvitatu zvinotevera chikamu che Sangano Rekuchinja uye Ruzivo Management chirongwa. Munyika yedu inogara ichichinja uye yakabatana, masangano ehutano hweveruzhinji, vatariri vepurogiramu, uye vashandi vehutano vanofanirwa kuve vakangwara mukugona kwavo kugara vachiwana, shanduko, uye vagadzirise maitiro avo zvichibva pauchapupu huchangoburwa hunoponesa upenyu. Kugamuchira shanduko yekuchinja uye mazano ekugadzirisa ruzivo uye maitiro anogona kusimbisa kushanda kwevashandi vehutano uye zvirongwa.
Muchidzidzo ichi, vatori vechikamu vachadzidza kuziva vateereri vavo; tsvaga nyaya mune seti yedata yakakodzera kune chinangwa chevateereri; nzwisisa maitiro ekugadzira akareruka asi anomanikidza data kuona; kugovera uye kuparadzira zvinoonekwa; uye kukurudzira kushandiswa kunoramba kuripo kweiyo data kuzivisa kuita sarudzo.
Knowledge Management muGlobal Health Programs:
Iyi kosi inopa nzwisiso yekutanga yekuti nei manejimendi yeruzivo yakakosha kune hutano hwepasirese. Vadzidzi vachawana matekiniki ekuwana akakosha, ruzivo-rwakavakirwa ruzivo mugwara uye maitiro.
Pamhepo Nharaunda dzeKudzidzira kune Global Health:
Nharaunda dzepamhepo dzekudzidzira dziri kuwedzera mukurumbira mota dzekutora ruzivo, kutarisira mashoko zvinobudirira, kushandira pamwe, uye kuvandudza kuwanikwa uye kunaka kwehutano hwehutano nehupfumi hushoma. Iyi kosi inopa zvakakosha kufunga uye marongero ekuvaka, kurera, uye kuongorora nharaunda idzi.
Mamwe makosi akakodzera anosanganisira:
Social Media yeHutano neBudiriro:
Social media inopa vashandisi kugona kusvika kune vateereri vakawanda pamusoro penzvimbo yakakura, inopa mukana mukuru wekutonga kweruzivo rwemagariro. Iyi kosi ichafamba mushandisi nenzira dzekugovana ruzivo kuburikidza nematanho akawanda kuitira kuti ubatanidze vateereri vakasununguka pasi rose.
Vashandi vezvehutano pasi rose vari kuramba vachiunganidza tsvakiridzo yakakosha uye ruzivo rwechirongwa. Kutsikiswa kweruzivo urwu mumajenari anoongororwa nevezera ndicho chinhu chakakosha chekutonga ruzivo. Iyi kosi ichapa vadzidzi zano pane imwe neimwe nhanho mujenari manuscript development process, kubva pakuronga nekugadzirira kuburikidza nekutumirwa kwechinyorwa chekupedzisira.
Dzokorora Uchapupu Hwacho
Limaye R, Sullivan T, Dalessandro S, Hendrix-Jenkins A. Kutarisa kuburikidza neSocial Lens: Conceptualising Social Aspects of Knowledge Management kune Global Health Practitioners. Nyaya yePublic Health Research 2017; 6:761. Vanyori vanokurukura kushanduka kwehutungamiri hweruzivo, wobva wapa zano rekugadzirisa ruzivo rwekutarisira ruzivo runobatanidza zvinhu zvevanhu uye zvemagariro kuti zvishandiswe mukati mehutano hwepasi rose. Kufungidzira kwavo kwehutungamiri hwemagariro evanhu vanoona kukosha kwehupfumi hwevanhu, social learning, social software uye mapuratifomu, uye masocial network, zvose zviri mukati memamiriro ezvinhu ehuwandu hwemagariro evanhu uye hunotungamirirwa nehutano hwevanhu. Ivo vanobva varatidza zvisingakwanisi uye vokurukura mafambiro emangwana ekufungidzira kwedu, uye kupa zano kuti iyi pfungwa nyowani yakakosha sei kune chero mushandi wezvehutano pasi rose mubhizinesi rekutonga ruzivo.
Humbowo-hwakavakirwa zvirongwa, hongu-asi zvakadini nezvehumwe humbowo hwakavakirwa pachirongwa? Glob Health Sci Pract. 2018;6(2):247-248. Vagadziri vezvirongwa nemamaneja ezvirongwa vanogoneswa zvirinani kutora zvidzidzo zvinoenderana nekuita tsvakiridzo uye ruzivo rwechirongwa kumwe kunhu kana paine magwaro akapfuma pane zvakaitwa uye kuti ndezvipi zvakakosha mamiriro angave akakanganisa mhedzisiro.. Zvichangoburwa Zvirongwa Zvekubika Zvirongwa kubva kuWHO zvinopa gwara rinobatsira pane zvinodiwa pamagwaro anonyatsobatsira.
Kofi PS, Hodgins S, Bishop A. Kushanda pamwe chete kwekuwedzera hutano matekinoroji: chiitiko chekuongorora che chlorhexidine yeumbilical cord care experience. Glob Health Sci Pract. 2018;6(1):178-191. Facilitating factors for the
Chlorhexidine Working Boka: (1) yakasimba, hutungamiriri huri pachena nemutengesi asina kwaakarerekera, kusimudzira kugovana pakati penhengo dzese; (2) yakavimbika mukati uye kunze kutaurirana; (3) zvakanyatsotsanangurwa mazwi ereferenzi ekuvaka pane zvakajairika kufarira kwakatenderedza nyore, kupindira kwehutano hunobudirira; (4) mabhenefiti akajeka ekutora chikamu, kusanganisira kuwana humbowo uye rubatsiro rwehunyanzvi; uye (5) zvekushandisa zvakakwana kutsigira mabasa emunyori.
cake I, Monclair M, Anastasi E, gumi Hoope-Bender P, Higgs E, Obregon R. Kuita zvatinoita, nani: kuvandudza basa redu kuburikidza nehurongwa hwekushuma. Glob Health Sci Pract. 2018;6(2):257-259. WHO ichangobva kuburitsa chirongwa chekuzivisa zviyero kutungamira rudzi rweruzivo rwunobereka, maternal, achangozvarwa, mwana, uye zvirongwa zvehutano zvine hukama zvinofanirwa kunyora kusimudzira kudzidza-purogiramu. Vanyori vanokurudzira zvakasimba vanobatana uye vanonyanya kutora chikamu kuti vashandise zviyero zvitsva sechikamu chehurongwa hwavo hwekuzivisa chirongwa..
Mugore S, Mwanja M, Mmari V, Easy A. Kugadziriswa kwepakeji yezvidzidzo zvekusimbisa kusimbisa mhuri yekuchengetedza
kuronga kudzidzisa vanamukoti navananyamukuta muTanzania neUganda. Glob Health Sci Pract. 2018;6(3):584-593. Zvidzidzo zvakadzidzwa pakugadzirisa humbowo-hwakavakirwa pasi rose dzidziso yekuronga mhuri zvinosanganisira kudiwa kwe: (1) batanidza vadzidzisi vehukoti uye nyamukuta kuti vatenge-mukati; (2) gadziridza hunyanzvi hwehunyanzvi hwevadzidzisi mukudzivirira kubata pamuviri
tekinoroji uye kugona-kwakavakirwa nzira dzekudzidzisa; uye (3) zvinoenderana nemamiriro emunharaunda kusanganisira kupfupisa zvirimo zvepasi rose zvenguva-inogumira pre-service education context.